Indawo enhle ngaseNorth Sea - I-Airbnb
Indawo enhle ngaseNorth Sea
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Merete
U-Merete Ungumbungazi ovelele
Le ndlu enhle, efulelwe ngotshani ihlukaniswe ngokuphelele endaweni yokukhosela ngemva kwendunduma khona kanye eduze noLwandle Olusenyakatho futhi inombono omangalisayo wesigodi somfula nezilwane zaso zasendle ezinothile.
Nasi isimo esikhethekile kakhulu futhi indlu iyamangalisa noma ufuna ukuzijabulisa nomndeni nabangane, woza ukuzojabulela ukuzola kanye nezwe elihle noma ufuna ukuhlala ugxile emsebenzini othile.
Kungaba khona indawo yokukhosela eduze kwendlu lapho ilanga likhona kusukela ekuphumeni kwalo kuze kube kusihlwa. Ungehla uyogeza emizuzwini embalwa.
Indlu iye yalungiswa ngokuphelele eminyakeni eyi-8 edlule. Esitezi esiphansi kunegumbi elisetshenziswayo elinomshini wokuwasha izitsha nomshini we-espresso, ikhishi elinehhavini nesishiso segesi, igumbi lokudlela kanye negumbi lokuphumula elibheke emfundweni kanye nombono omncane olwandle. Nali futhi ikamelo lokulala elihle elinendawo enhle yokusebenza kanye nokubukwa ngasentshonalanga, kanye nephasishi elinokufinyelela endlini yangasese kanye nokufinyelela kuthala ngasentshonalanga.
Kukhona ukugeza esakhiweni esiseceleni, ongena ngaso usuka ngaphandle. Lapha ungakwazi futhi ukugeza usawoti uma kade ohambweni olwandle.
Imininingwane eminingi yasekuqaleni yendlu igciniwe, okuhlanganisa nezitezi eziya ophahleni kanye nesikhala esiphansi esisebenza njengomnyango. Izitebhisi zingalengiswa ngaphansi kosilingi uma unezingane ezincane nawe okungadingeki ukuthi uzikhuphukele wena.
I-attic isanda kufakwa ngegumbi lokulala elikhulu elivulekile odlula kulo ukuze ungene egunjini elincane elibheke ulwandle.
Indlu ifudunyezwa ukufudumeza kukagesi futhi kunesitofu esihle sezinkuni esibaswayo phansi.
Kunamasimu ezinhlangothini zombili zendlu empumalanga nasentshonalanga enefenisha yasengadini,
i-grill yamalahle kanye ne-parasol. Kukhona nesishisi esikhulu segesi sangaphandle.
Indlu itholakala yodwa futhi kukhona indlela ngemuva kwendlu enokufinyelela okuqondile ogwini. Unyaka wonke kumnandi lapha kokubili njengendawo yamaholide futhi njengendawo yokuphephela yomsebenzi. Kukhona i-inthanethi engu-50/50mbit.
Phakathi nezinyanga zasehlobo, ngoJuni 20 kuya ku-August 31, indlu iqashwa kuphela masonto onke. Kwamanye amasonto, kungase kwenzeke ukuqasha isikhathi esifushane.
Ekuhambeni, ugesi osetshenzisiwe ongu-3 kr / kwh uyakhokhwa. Phakathi nezinyanga zasebusika, indlu ihlale ishisa futhi ngenxa yalokho ifudumala kakade lapho ifika.
Kukhona umbhede kanye nesihlalo esiphezulu esitholakalayo.
Uma unemibuzo, wamukelekile kakhulu ukuthi ungithinte.
Indlu itholakala ngasogwini lolwandle, lapho ungabhukuda khona, ubuke ukushona kwelanga noma ujabulele iNorth Sea enhle kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, indlu ibhekene nesigodi somfula esihle, lapho kukhona izilwane zasendle ezicebile kanye nokuphuma kwelanga okumangalisayo.
Uma ufuna ukuthenga okunethezekile, ungavakashela i-Lemvig, enempilo enhle yokuthengisa, izindawo zokudlela nezindawo zokudlela lapho ungathenga khona izinhlanzi ezintsha.
Kukhona kokubili okuhlangenwe nakho kwamasiko nemvelo endaweni okuvela kumagalari amaningi, i-manor Nørre Vosborg, Bovbjerg Lighthouse - kanye nesitolo segrosa sendawo, esiphethwe izakhamizi zendawo futhi lapho ungathola khona ikhofi futhi uxoxe isitolo sokudla.
Ngingathintwa nge-imeyili futhi ngiphendule kungakapheli amahora angama-24 kamuva.